Waalidiin lagu xukumay xabsi ka dib dil sharafeed | Somaliska
Maanta ayaa maxkamad waxay 10 sano oo xarig ah iyo musaafurin ku xukuntahay labo waalid oo ka soo jeeda dalka Afghanistan kuwaasoo lagu eedeeyay in ay dil u geysteen wiil saaxiib la ahaa gabadhooda sanadkii 2005. Wiilka ay dileen reerkaan ayaa isaga xitaa Afghanistaan ka soo jeeday iyagoo saliid u karkariyay ka dibna midi lagu waxyeeleeyay.
Markii hore ayaa wiil 17 sano jir ah oo reerkaan ka dhashay lagu eedeeyay dilka isagoo hada xabsi ku jira balse wiilka ayaa booliiska u sheegay in hooyadiis iyo aabihiis ay ka dambeeyeen dilka. Waalidinta ayaa sheegay in wiilkooda uu ka dambeeyay dilka.
Gabadh kale oo ay dhaleen reerka iyo qof qaraabo la ah oo degen Denmark ayaa maxkamada u sheegay in wiilka uu saxanyahay oo hooyada iyo aabaha ay ka dambeeyeen dilka.
Wiilka ayaa lagu xukumay in 1 sano uu xabsiga ku sii jiro balse waxaa laga dhaafay in dalka laga musaafuriyo.
Arintaan ayaa waxay la xiriirtay waxa loo yaqaan dilka sharafta oo caado ka ah wadamada aasiya iyo carabta.
maxaa dilka u geeyay afganistaan miyaa lajoogaa kaleexo dhaalibaan ayaa sugeyseee